NAGU SAABSAN | Mysite 1
"Waxbarashadu waa hubka ugu awoodda badan oo aad isticmaali karto in la beddelo dunida". Nelson Mandela
ALAPTO waa ...
Aldo Leopold Association of waalidiinta Macalimiinta & Kuwa kale ~ Waxaan nahay koox shaqsiyaad ah oo isu yimid si aan u hubinno in khibrad wax barasho ay suurtogal u tahay ardayda dhigata Aldo Leopold Community School ee Green Bay, Wisconsin. Si wada jir ah ayaan u qorsheyneynaa munaasabadaha si aan uga dhex dhisno qoys ka dhex jira qoyska iskuulkeena. Waxaan qorsheyneynaa lacag uruurinno gaar ah oo lacag u keena dugsiga si aan u sameyno safarro dibadeed iyo fursado kale oo khibrad waxbarasho ah. Waxaan ku dadaalnaa inaan taageerno ardayda iyo qoysaska dugsiga kaliya, laakiin sidoo kale shaqaalaha.
Waxaan qiimeyneynaa waxbarasho khibrad leh, waa waxa Aldo Leopold Community School uu ku saabsan yahay. Hadafkayagu waa inaan tan suurta gal ka dhigno xagga qorshaynta, abaabulka, tabarucida, iyo taageerada.
Iyada oo ah iskuul khibradeed ku saleysan bulshada, ALAPTO, PTO-gayada, wuxuu u shaqeeyaa wax yar oo ka duwan kuwa kale ee loo yaqaan 'PTOs'. Waxaan nahay 501 (c) 3 urur aan faaiido doon ahayn oo leh guddi agaasime buuxa, xeerar, iyo hogaan muuqda. Ujeeddadayada koowaad waa in aan aruurinno lacag lagu maalgeliyo khibrad wax barasho iyo in la abuuro beel ka dhex jirta qoyska dugsiga oo taageera waxbarida khibradda leh.
Waxbadan ka baro xubnaha guddigayaga .
Waxbadan ka baro barashada khibradaha .
Kaga bixiso khidmaddaada khibradda barashada khadka tooska ah .